श्रावण १८ कागज पत्र राशिफल - KagajPatra Media Network
Read Time:5 मिनेट,0सेकेन्ड
साताको अन्तिममा महत्त्वपूर्ण कार्यमा व्यवधान आइपर्ला । सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ योग छ । सरकारी निकाएको भय रहला । जिद्दीपनाले गर्दा काम बिग्रने डर भएकाले सावधान रहनुहोला ।
अरुको प्रगती बाट अभिप्रेरित हुने हरूलाई बिस्तारै लाभ मिल्नेछ । विभिन्न सामानको किनमेल हुनेछ । लाभ,हानी,आय,व्यय,सुख,दुख वरावरी खालको समय छ ।
धार्मिक कार्यमा सहभागी बन्नु पर्नेछ । नयाँ कार्य वा धन आर्जन गर्ने अवसर मिल्नेछ । आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउनेछ ।
मनमा जोश,जाँगर र उमङ्ग बढेर जाने छ । रोकिएका सम्पुर्ण काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । वैदेशिक कार्य अघी बढ्नेछ । साहित्यिक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ । स्वास्थ्यमा भने समस्या आउला !
आत्मबलमा कमी आउनेछ । मनोबल मा पनि परिवर्तन हुने भएकाले सही निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । मनमा दुविधा उत्पन्न हुनेछ । मतिभ्रष्ट हुने समय छ, सचेत रहनु होला ।
आँटेको र नयाँ कार्य पुरा होला । शुभकार्यको चर्चा सबै तिर चल्नेछ । आदर्श ब्यक्तिको सहकार्यले नयाँ अनुभव मिल्नेछ । पढाइमा प्रगति हुनेछ ।
बन्धु बान्धवबाट सहयोग मिल्नेछ । साताको अन्त्य तिर काममा सफलता मिल्नेछ । जोश जाँगर र हिम्मत बढ्नेछ । एउटै कामबाट दोहोरो घाटा हुने योग छ ।
महिनाको अन्त्यमा कार्य सिद्धि हुने योग छ । प्रतिस्पर्धा गर्दा फाईदा हुने योग छ । विपरित वर्गबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ ।
मनमा भावुकता र उत्ताउलो पन देखा पर्ने छ । अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च हुनेछ । प्रेममा सानो सानो कुरामा पनि मनमुटाव आउनेछ । आफन्त बाट काममा वाधा आउने छ ।
अनुहारमा निरासता देखा पर्ने छ । धर्म,कर्ममा मन लाग्नेछ । गरेका कामबाट सोछे जस्तो लाभ नहुन सक्छ । काममा ध्यान दिनुहोला !
अरुलाई प्रभावित पर्नाले काम राम्रो बन्नेछ । सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । मिष्ठान्न भोजनको मन जाने छ । श्रमको उचित मुल्याङ्कन हुनेछ ।
प्रेमिका को सहयोग पाईनेछ । नयाँ कार्यको योजना बन्नेछ । नजिकको मित्रसँग भेटघाट हुनेछ । सहयोगी हात हरु अघी बड्ने छन !
१८ साउन, बनेपा । ३३ किलो सुन तस्करी र मोरङका सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत बिराटनगरले थुनामा राख्न आदेश दिएका व्यापारी महावीर गोल्यानलाई सर्वोच्चले १० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ भने अरुको हकमा उच्च अदालतकै आदेशलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ । सुनकाण्डकै आदेशमा पदीय आचरण अनुसार कर्तव्य […]
दोलखामा ट्याक्टर अनियन्त्रित भई पल्टिँदा एक जनाको मृत्यु
बिरामी बोकेको जीप अरुण नदीमा खस्यो
दाङ तुलसीपुरमा गोली प्रहार गरी लुटपाट
भीभीआईपीले चढ्ने हेलिकप्टर काठमाडौं आइपुग्यो